Qalbi Dhagax Muxuu u Gilgiley Quluubta Soomaalida? |
4-ta Qaybood Ee Suukh-gaynta Shirkada ‘’4 p’s of Marketing’’ -Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, October 8, 2016
Wax kasta waxa ay isbadaleen taariikhda markii ay ahayd 23-dii bishii Agoosto ee lasoo dhaafay, xilligaas oo Cabdikariim uu ka duulay magaalada Muqdisho, kana degay Gaalkacayo, si uu halkaasi uga soo qaado wiil yar oo qaraabadiisa ka mid ahaa sababo caafimaad awgood. Sida uu BBC-da u xaqiijiyey Maxamed Daahir oo ka tirsan mas’uuliyiinta jabhadda ONLF oo ku sugan magaalada Johannesburg, Qalbi Dhagax waxa uu Gaalgacayo tagay galinkii dambe ee maalintaas, isla habeenkiina waxaa qabtay ciidammada Galmudug.
Sidaasi darteed wuxuu noqonayaa xubinkii ugu sarreeyay ee ONLF ka tirsan oo u gacangala Itoobiya, balse ma ahan kan kaliya ee Soomaaliya gudaheeda inta laga qabto loo wareejiyo Itoobiya. Ilaa 5 sargaal oo kale oo sarsare ayaa 20kii sano ee lasoo dhaafay laga qabtay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo laga qabtay magaalooyinka Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacayo iyo Guriceel sida ay sheegeen ONLF. Waxaa sidoo kale jirey dad jabhadan ka tirsanaa balse aanan wax mas’uuliyad haynin jabhadan oo iyagana la dhiibay.
Wixii markaas ka dambeeyay ma jirto cid ka tirsan madaxda sare ee laanta fulinta oo arrintan ka hadashay, isku dayo faro badan oo aan samaynay, wax jawaab ah lagama bixinin. Warbaahinta dowladda sida wakaaladda wararka, Raadiyoow Muqdishoow iyo Taleefishinka ayaan iyaguna sooba hadalqaadin dhiibista Qalbi Dhagax xili warka ugu weyn ee warbaahinta kale ay tabineyso uu kaas yahay.
sawirka AFP Image caption ONLF ayaa inta badan laga saaray deegaanada Itoobiya balse waxay taageeryaal badan ku leeyihiin qurbajoogta
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo isna la hadlay BBC-da ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan la dagaalanka Alshabaab, ayna suurtogal ahayn in cid Itoobiya cadaw ku ah lagu magangaliyo Soomaaliya. Dad aad u badan oo isugu jira ururada bulshada rayidka, qurba-joogta, aqoonyahannada iyo shacabka qeybihiisa kala duwan ayaa dareenkooda ka dhiibtay, waxayna cambaareeyeen waxa dhacay.
Maxay tahay ONLF?
Aragtida koowaad ee la’isku wada raacsanyahay ayaa ah in aysan meelna sharciga Soomaaliya kaga qorneyn in qof Soomaali ah oo gudaha dalka ku sugan loo dhiibo dowlad kale. Qodobka 36-aad ee dastuurka ayaa si kooban oga hadlaya isu celinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha ee dalalka kale, wuxuuna shuruud ka dhigayaa in uu marka hore jiro heshiis ka dhaxeeya labada dal in ay isu celiyaan maxaabiis, isu celintana ay ahaataa mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Ma jiro wax heshiis ah oo la ogyahay oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay isugu celiyaan eedeysanayaal ama maxaabiis, hase yeeshee 22-kii bishii Luuliyo ee sannadkan 2017-ka ayaa dowladda Soomaaliya waxay lasoo wareegtay maxaabiis gaaraysa 114 oo Soomaali ah oo ku xirnaa xabsi Itoobiya ku yaalla , waxaana dadkaasi ka mid ah qaarkood oo dambiyo yaryar loo heystay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ololaha doorashada ku galay illaalinta xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, wuxuu ololihiisa iyo balanqaadyadiisa ku salaysnaayeen waddaniyad iyo illaalinta sharafta iyo karaamada Soomaaliya. Waana sababtaasi tan ugu badan ee ay dadka cuskanayaan marka ay aragtiyadooda dhiibanayaan, iyaga oo ku baaqaya in madaxweynaha uu arrintan ka hadlo, wixii laga qaban karana uu ka qabto.
Tags: Qalbi Dhagax Muxuu u Gilgiley Quluubta Soomaalida?
Next post Muxuu Sargaalkaan Ku Dilay Xaaskiisa?
Previous post Maxaad Ka Ogtahay Filimkii Sayidka ee Aan Waligii La Daawanin?